Al-Shabaab oo xukun dil ah ku fuliyay labo ruux – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAAl-Shabaab oo xukun dil ah ku fuliyay labo ruux
July 15, 2018 Falastiin Axmed WARARKA MAANTA Comments Off on Al-Shabaab oo xukun dil ah ku fuliyay labo ruux
(Warqaat.com)—maxkamadda Al-Shabaab ee ku taalla degmada Jilib ee gobolka Jubadda Dhexe ayaa xukun dil ah ku fulisay labo ruux oo lagu eedeeyay in ay dil ka geysteen degaan hoos yimaada degmada Jilib.
Maxkamadda Al-Shabaab ayaa xukun qisaas ah ku fuliysay Labada ruux ee lagu kala magacaabo Gaabow Yare Ibraahim oo 36 Sano jir ah iyo Maxamed Bashiir Cabdi oo 29 Sano jir ah kuwaas oo dhawaan dil u geystay nin Xoolo dhaqata ah oo lagu magacaabi jiray Guudle Caddaan Xasan oo dilkiisa ka dhacay Baadiyaha Degaanka Galsheeq Abiikar ee hoosyimaada Degmada Jilib.
Qaadiga Maxkamadda Al-Shabaab ayaa sheegay in raggaan ay qirteen falka lagu soo eedeeyay ,islamarkaana xukunkooda uu noqday dil.
Goobta xukunkaan uu ka dhacaayay oo aheyd meel fagaare ah ayaa waxaa isugu yimid boqolaal ruux oo dadka degaanka ah, kuwaasi oo daawanaayay qaabka xukunka uu u dhacayay.
Xukunada noocaan oo kale ah ayeey Shabaab ka fuliyaan Gobolada dalka Soomaaliya, gaar ahaan Magaalooyinka ay joogaan iyaga oo sheegaya qofka falka lagu fulinaayo inuu sameeyay qiraal.
657,140 total views, 2,225 views today
657,140 total views, 2,225 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
657,012 total views, 2,223 views today
657,012 total views, 2,223 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
657,043 total views, 2,224 views today
657,043 total views, 2,224 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
657,105 total views, 2,225 views today
657,105 total views, 2,225 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
657,164 total views, 2,223 views today
657,164 total views, 2,223 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]